China nwa microfiber mkpuchi akwa nhicha ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta |Leze
Ebe amụrụ: Hebei, China Aha ika: ỌZỌ
Nọmba nlereanya: 005-2 Ihe: Microfiber, okomoko 80% Polyester 20% Polyamide
Njirimara: Ihe akaebe nwata, abịakọrọ, akpọnwụọ ngwa ngwa Ụdị: akụkụ anọ
Jiri: Osimiri Ụkpụrụ: Mbipụta anụmanụ
Otu afọ: Afọ iri na ụma Agba: Pink
Teknụzụ: warp kpara akpa
Ikike inye: Katọn/katọn 400 kwa ọnwa
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa OPP ma ọ bụ PE, katọn
Ọnụọgụ(Iberibe) 1-20 >20
East.Oge (ụbọchị) 10 A ga-enwe mkparịta ụka
Warp kpara akpa
Ejiri agba nkịtị
ụlọ ịsa ahụ, akwa akwa osimiri, akwa nhicha mmiri
Mbukota & nnyefe
shijiazhuang leze trading co., Ltd dị na shijiazhuang hebei n'ógbè-a kasị mma ebe maka textile Industry.Our isi ngwaahịa na-agụnye kichin towels, bath akwa nhicha, bathrobes, ụgbọ ala ihicha ákwà, ihu towel , aka towel, ụbọchị na-eji towel, mgbe anyị isi isi. ahịa na-abụkarị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Ndịda Europe, Western Europe, na South America.Enwere ihe dị ka ndị ọrụ 110 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ anyị n'oge na-adịbeghị anya.Site n'ichepụta ike na mmepe siri ike, anyị nwere ike chepụta dịka ihe ị chọrọ ma ọ bụ mepụta dịka atụmatụ ị nyere si dị.
1. Olee ndị anyị bụ?
Anyị dabeere na Hebei, China, malite na 2015, na-ere na Northern Europe (11.21%), Southeast Asia (10.42%), Southern Europe (10.05%), Western Europe (9.03%), South America (8.76%), n'etiti. East (8.44%), Central America (8.16%), Eastern Asia (8.08%), South Asia (7.46%), Eastern Europe (4.26%), North America (3.45%), Ụlọ ahịa (3.21%), Oceania( 1.02%), Africa (0.34%).Enwere ihe dị ka mmadụ 11-50 na ụlọ ọrụ anyị.
2. Olee otú anyị pụrụ isi kwe nkwa ịdị mma?
Mgbe niile tupu mmepụta sample tupu uka mmepụta;
Nyocha ikpeazụ mgbe niile tupu mbupu;
3.kedu ihe ị nwere ike zụta n'aka anyị?
Microfiber akwa, Microfiber ihicha ngwaahịa, microfiber terry towel, microfiber ngwaahịa, microfiber nhicha Mitt
4. gịnị mere na ị ga-azụta n'aka anyị, ọ bụghị n'aka ndị ọzọ na-ebubata ihe?
shijiazhuang leze trading co., ltd emi odude ke shijiazhuang hebei n'ógbè-a kasị mma ebe maka textile Industry.Our isi ngwaahịa na-agụnye kichin towels, bath akwa nhicha, bathrobes, ákwà mgbochi na handkerchiefs, mgbe anyị isi ahịa bụ ukwuu n'ime na Southeast Asia.
5. Kedu ọrụ anyị nwere ike inye?
Usoro nnyefe anabatara: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA;
Ego ịkwụ ụgwọ anabatara:USD,EUR;
Ụdị ịkwụ ụgwọ anabatara: T/T,L/C,Western Union,Cash;
Asụsụ: Bekee, Chinese
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ mgbasa ozi kacha mma - Microfiber ihicha akwa maka kichin, ụlọ ọrụ na ụgbọ ala - Leze
Osote: akwa microfiber pu mkpuchi ụgbọ ala na-ehicha akwa nwere nkọwa ahaziri iche
Towel bath kpuchiri nwa
Towel kpuchiri nwa
Dinosaur kpuchiri Towel
Akwa nhicha ịsa ahụ kpuchiri ekpuchi
akwa akwa mkpuchi
Towel kpuchiri Unicorn
nwa adụ microfiber mkpuchi akwa akwa